रोनाल्डोको २ गोलमा युभेन्ट्सको सहज जित !! मिलानको खेल अगाबै युभेन्ट्स शिर्ष स्थानमा !! - Experience Best News from Nepal
घारेलु मैदानमा युभेन्ट्सले उडिनेसे माथि ३-१को जित दर्ता गर्दै इन्टर मिलानको खेल अगाबै शिर्ष स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ । पहिलो सिरी ए हार लाजियो विरुद्ध ब्यहोरेको युभेन्ट्सले उडिनेसे माथि भने सहज जित दर्ता गरेको छ ।
खेल सुरुवातमा रोनाल्डोले ९ औ मिनेटमा गोल गर्न सफल भएका थिए भने रोनाल्डोले लगातार चौथो खेलमा गोल गरेका हुन ।
पहिलो हाफको ९ औ मिनेटमा डिबालाले रोकेको बल रोनाल्डोको खुट्टामा पर्दा रोनाल्डोले प्रहार गरेका थिए, साथै पहिलो हाफ कै ३७ औ मिनेटमा हिगोइनले दिएको पासमा रोनाल्डोले नै गोल गर्दै अग्रतालाई दोब्बर पारेका थिए ।
पहिलो हाफमा बोनुचीले समेत तेस्रो गोल गर्दै युभेन्ट्सलाई पहिलो हाफमा ३ गोलको अग्रता दिलाएका थिए । बारम्बार ह्याट्रिकबाट चुकेका रोनाल्डोले ठुला मौकाहरु गुमाएका थिए भने अन्तिम ९०+३ मा उडिनेसेका पुस्सेटोले एक गोल गर्दै उडिनेसेका निम्ति एक मात्र गोल गर्न सफल भएको थियो ।
युभेन्ट्सले १६ खेलबाट ३९ अंक बनाउन सफल भनेको छ ।
मिलानले ड्र खेल्दा युभेन्ट्सलाई शिर्ष स्थानमा उक्लिने अवसर !!